yakakwira frequency mabhegi - induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
yakakura frequency fani
Iko kukura kweanogona emuchina kunoenderana nekugadzirwa kwemabheyari ayo anogona kushanda pakakwirira kutenderera kumhanya. Rudzi rwemazuva ano rwekutakura iyo inoshandiswa muindastiri indasitiri ndeye induction kupisa inotakura. Izvi zvine zvakwakanakira zvakawanda. Induction kudziisa mabheyari haidi chinhu chekuzora. Iko hakuna kubatana kwehunyanzvi… Read more
Categories Kupinza Kupisa PDF Tags yakakura frequency fani, yakakwirira frequency kudziya fani, induction kubereka, induction bearing heater, induction yakatakura heater pdf, induction inotakura pdf, induction kupisa kutakura, induction kupisa fani pdf, kudzimisirwa kupisa kunodzora fani yakakodzera